As of Tue, 07 Apr, 2020 18:40
महिलालाई प्राकृतिक स्रोतको पहुँचमाथिको अधिकार बढाउनुपर्छ
भनिन्छ, आधा धर्ती अनि आधा आकाश ओगट्ने नारीहरूले संसार बदल्न सक्छन् । मात्र खाँचो छ अवसरको । लैंगिक समावेशीकरण हुने हो भने अवश्य नै उनीहरू पनि परिवर्तनका संवाहक बन्न सक्छन् । प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा महिलाको भूमिका बढी छ । तर स्रोत परिचालन तथा प्रयोगमा महिलाको भूमिका ज्यादै न्यून छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वन क्षेत्रमा लैंगिक समावेशीकरण’ नामक गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको पहुँचमा महिलाको अधिकार हुनुपर्ने, महिलामाथि हुने भेदभाव अन्त्य, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारको अन्त्य हुनैपर्ने, निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता बढाउनैपर्ने लगायतका मुद्दाहरू उठाइएका थिए । यसै विषयमा विभिन्न सरोकारवालाले दिएको अभिव्यक्तिको सार :
संघीयताको ढाँचा परिवर्तन नगरे देशको विकास सम्भव छैन
बि.स २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानसँगै देश यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको दौरानमा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले संघीय बजेटसँगै तीनवटा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, संघीयताको मर्मअनुरूप राजनीतिक दलहरूले काम नगर्दा संघीयता राज्यका लागि बोझमात्रै होइन, दलहरूको कमाइ खाने भाँडो बनेको संघीयताका जानकार विनोद न्यौपाने बताउँछन् ।
अनलाइन कारोबारले कारोबार रकममा सुधार
गत साता मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक करिब २ सय अंकले बढेर आइतबार कारोबार सुरु हुँदा १६३८.३७ अंकमा पुगेको छ । निरन्तर उच्च अंकले बढेको बजारमा जोखिम पनि उत्तिकै बढ्छ । निरन्तर सुधारसँगै कारोबार रकम पनि उच्च दरमा बढेको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई राफसाफ गर्दा नेटिङ प्रणालीमार्फत कारोबार समयपछि मात्र नेटिङ गर्ने गरी सहज नीति बनाएपछि कारोबार रकम धेरै भएको छ । त्यसका साथै सेयर बजार बिनाकरेक्सन नै उच्च अंकको सुधार कायम रहँदा जोखिम बढेको स्पष्ट देखिन्छ ।
५० प्रतिशत अनुदानको कुनै औचित्य छैन
एकमात्र संघीय क्षेत्र रहेको हुम्लाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर विजयी भएका छक्कबहादुर लामा हुम्लाका एक बौद्धिक व्यक्ति हुन् । साँसद र सहायकमन्त्रीसम्म भएका लामासँग लामोे समयसम्म विकास र पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । त्यसैगरी हुम्लाको उत्तरी लिमी क्षेत्रमा वातावरण, जडिबुटी लगायतको अध्ययन गरेका लामाले कैलाशमण्डला नामक पुस्तक पनि लेखेका छन् । उनी देश विदेशमा गेस्ट लेक्चररको रूपमा पनि जाने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका उनै लामासँग त्यस क्षेत्रको विकास निर्माण र जनताले तत्काल राहत पाउने कार्यका लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ भन्ने बारेमा कारोबारकर्मी रेशमराज रोकायाले गरेको कुराकानी :
प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश (हाल प्रदेश नम्बर ५) कृषि, पर्यटन, उद्योगका लागि नेपालकै उत्कृष्ट प्रदेश रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबैको ध्यानआकृष्ट गर्न सफल सम्पदा बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी, बाघका लागि उत्कृष्ट क्षेत्र बर्दिया निकुञ्ज, भारतको रानीमहलको झल्को दिने पाल्पाको रानी महल, कपिलवस्तु लगायतका स्थानमा भएका बुद्धस्थलहरू, निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सिमेन्ट र छडलगायत अन्य ठूला उद्योग, नेपाल भारतको सबैभन्दा ठूलो स्थल नाका बेलहिया–भैरहवा लगायतका कारणले यो प्रदेश आफैंमा महत्वपूर्ण छ । प्रदेशले वर्ष २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइरहेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन, तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरिसँग कारोबारकर्मी मनोरञ्जन शर्माले जारी भ्रमण वर्ष, यस क्षेत्रको पर्यटन तथा औद्योगिक विकासलगायतका विषयलाई समेटी गरेको कुराकानीको सार :
विश्वभर यतिबेला कोरोना भाइरसको संकट छ । चीनलगायत विश्व स्वास्थ्य संगठनले जति प्रयास गर्दा पनि यो रोग नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । नेपालको दोस्रो ठूलो विकास साझेदार चीनलगायत नेपाली श्रमिकको आकर्षक रोजगार गन्तव्य कोरियासम्म यो रोग फैलिसकेको छ भने भारतलगायत नेपाल पनि यसको उच्च जोखिममा छन् । अर्कोतर्फ तत्काल नियन्त्रणमा आउने सम्भावनासमेत नदेखिएको कोरोना भाइरसको समस्या अझै लम्बिए त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिएको छ । कोरोनाले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पार्ने आंकलन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संघ संस्थाले गरिसकेकाले यसबाट बच्न पूर्वतयारी आवश्यक छ । नेपालका लागि चीन ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकै कारण कोरोनाले नेपालको व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउने देखिएको हो । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतपछि चीनकै हिस्सा ठूलो छ ।
स्याङ्जामा जन्मिएका डा. बुद्धिसागर पौडेल हाल मुलुकको निष्ठावान कर्मचारीको रूपमा आफ्नो छवि स्थापित गर्न सफल भएका छन् । उनी कम उमेरमै सहसचिव पनि बने । १७ वर्षअघि अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले अस्ट्रेलियाबाट वाइल्डलाइफ इकोलोजीमा विद्यावारिधि समेत गरेका छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको १३ वर्षमा नै पौडेल सहसचिव बनिसकेका थिए । उनी हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारीमा छ । ६ वर्षका लागि नेपालले सञ्चिति गरेको कार्बन विश्व बैंकलाई बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको आलोचनाका बीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा छ । नीति तथा कार्यक्रममै आफ्नो अनुकूलताको विषय राख्ने र सोही अनुसार बजेट बनाई सेटिङमा काम गर्ने दलाल छायासमेत बजेटमा पर्ने गरेको विषय पनि यही समयमा बाहिर आएका छन् । हरेक वर्ष बजेट ल्याउने तर खास जनतासम्म विकासको महसुस नहुने समस्या हरेक वर्षझैं यसपालिको बजेटमा पनि पुनरावृत्त भएको आरोप पनि सरकारमाथि छ ।
केही दिन नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा संसद्मा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनायो र सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध पनि भयो । पार्टीले त्यसलाई गच्छदारको व्यक्तिगत लडाइँ भनेर पाइला पछि हटायो । अहिले सत्ताधारी पार्टीका नेता तथा सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनका लागि एजेन्टसँग कुरोकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । सत्ताधारी पार्टीले मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगायो वा मन्त्रीले भनेबमोजिम नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको प्रसंग सार्वजनिक भयो । यसअघि विभिन्न पार्टीका विभिन्न नेताहरू भ्रष्टाचारमा दोषी भई जेलसजाय भोगिसकेका छन् ।
सरकारले गत साता बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको जानकारी गराउँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यचाहिँ यथावत् राखे । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब १० प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारेको जानकारी दिएका थिए । गत आवमा उनले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट घटाएका थिए ।
सरकारले आगामी वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म २५६४औं अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । ‘द वर्थ प्लेस अफ लर्ड गौतम बुद्ध, द फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म एन्ड वर्ड पिस’ नाराका साथ सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो । बुद्धको जन्मभूमिमा धार्मिक पर्यटकको प्रचार प्रसार गरी नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई टेवा पु¥याउने लक्ष्यसहित सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको छ । मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले यसै साता सरोकारवाला निकायसँग बैंठक बसी सम्मेलनको कार्ययोजना र भावी रणनीतिसम्बन्धी छलफल आयोजना गरेका छन् । ‘२५६४औं बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन २०७७ आयोजक समिति’ को बैठकले २९ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
गत भदौदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य सचिव छन् । २०४६ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग हुलाक सेवादेखि १० वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोग, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय हुँदै संघीयतापछि गठन गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्म काम गरेको अनुभव छ । २०७४ पुसमा प्रकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगमा पहिलो कायममुकाम सचिव भएका उनीसँग संघीय अर्थतन्त्र र यसमा भएको अभ्यासबारे पनि राम्रो अनुभव छ ।
विगत साढे तीन वर्षदेखि निरन्तर घटेको सेयर बजारमा पछिल्ला दिनहरूमा सुधारको संकेत देखिएका छन् । २०७३ साल साउन १२ गते अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु १८८१ अंकमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) २०७६ मंसिर १० गते ११०९ अंकमा झरेको थियो । गत मंसिरमा १० गते नेप्सेले बनाएको बेस प्वाइन्टबाट बजार पुनः सुधारको गतिमा देखिएको हो । गत मंसिरदेखि सुधारको गतिमा रहेको नेप्से आइतबारसम्ममा आइपुग्दा १३६२ अंकमा पुगेको छ । बजारमा देखिएको निरन्तर उच्च अंकको वृद्धि नयाँ लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गरेर दीर्घकालीन लगानी गरेको खण्डमा मात्र पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको उच्च अंकको सुधार टिक्ने देखिन्छ । फल लिनका लागि अहिले पनि बैंकिङ र हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
जुम्लाबाट ३२४ जनाको‘स्वाब’परिक्षणका गर्न पठाइयो